सेल्टल्ट एक प्रभावी वेब निकासी उपकरण प्रस्तुत गर्दछ
मान्छे पहिले नै वेब स्क्रैपिंग को महत्व को बारे मा जान्दछन्, त्यसैले त्यहाँ यसको लागि एक ठूलो आवश्यकता छ. मागमा नगद बोलीको लागि, धेरै वेब स्क्रैपिंग कार्यक्रमहरू विकसित गरिएको छ. तिनीहरूमध्ये कोहीसँग एक निराशाजनक कटौती वा अर्को हो - small office network setup with servers.
वास्तवमा, केही कम्पनीहरूले आफ्नो व्यवसायको लागि उपयुक्त छ कि ठोकर गर्नु अघि धेरै अनुप्रयोगहरु कोसिस गर्नु पर्छ।. यहाँ तपाईंको लागि सिफारिश छ. वेबसाइट अन्वेषक9को प्रयास गर्नुहोस्. 62, प्रयोग गर्न सजिलो वेबसाइट स्क्रैपिंग सफ्टवेयर.
वेबसाइट अन्वेषक9संग. 62, यो सम्पूर्ण वेबसाइट डाउनलोड गर्न र स्थानीय हार्ड ड्राइवमा सबै सामग्री सुरक्षित गर्न सजिलो छ. डाउनलोड गरिएका साइटहरू प्रयोग र पुन: प्रयोग गर्न सकिन्छ किनकि तिनीहरू पहिले नै उनीहरूको साथ सुरक्षित छन्. यस कार्यक्रमको अन्य आकर्षक विशेषताहरु तल छलफल गरिएको छ.
100 सौ पानाहरु लाई एकै पल्ट मा स्क्रैप गर्न को लागी एक पल्ट
एक चीज छ कि यो उपकरण खडा छ यसको क्षमता. यसले एक सय वेब पेजहरू, तस्बिरहरू, ग्राफिक्सहरू, र अन्य प्रकारका डेटा तत्वहरू एक एकल रनमा डाउनलोड गर्न सक्छ. यसमा सँगै धेरै वेबसाइटहरु बाट फाईल डाउनलोड गर्न को लागी एक नै समयमा छ. तपाईले मात्र तपाइँको सबै लक्षित यूआरएलहरू सूचीबद्ध गर्न आवश्यक छ.
कहिलेकाँही तपाईंलाई लक्षित वेब पेजहरु बाट केवल केहि निश्चित सामाग्री को आवश्यकता हुन सक्छ. यो उपकरणले तपाईंलाई वेबसाईटबाट मात्र आवश्यक सामग्री फिल्टर गर्न सक्दछ किनभने तपाईलाई मद्दत गर्नेछ. अन्य शब्दहरुमा, वेब अन्वेषक 9. 62 पनि उच्च स्तरको सटीकता प्रदान गर्दछ.
30-दिनको परीक्षण अवधि
निश्चय, तपाइँलाई केही दिनको लागी यो प्रयास गर्न अनुमति छ कि तपाइँ यसलाई खरिद गर्न वा किन्न वा. यसकारण यो 30-दिन परीक्षण अवधिको साथ आउँछ. यसले 30 औं दिन पछि प्रतिक्रिया दिन रोक्न नसक्दासम्म तपाई यसलाई खरिद गर्नुहुन्न.
यो विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम को धेरै संस्करणहरु संग काम गर्दछ. यसले Windows Vista, 2003, 95, XP, Me, 2000, NT, र Windows 98 को समर्थन गर्दछ.
सानो आकार यसको आकार केवल 662 छ. 62KB. यो 1 MB सम्म पनि छैन. त्यसैले यसले तपाईको हार्ड ड्राइभमा केवल भण्डारण ठाउँको एक नगण्य रकम लिनेछ. यो अब धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकी मानिसहरूले अहिले आफ्नो भण्डारण सुविधाहरू व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्छन्. ती साना अनुप्रयोगहरू मनपर्छ. यो कार्यक्रमको उत्कृष्टताको लागि अर्को कारण हो. अनलाइन प्राविधिक सहयोग यसको प्रयोग गर्दा, तपाईं केहि चुनौतीहरूमा भाग लिन सक्नुहुन्छ. यसैले यो प्रोग्राम 24/7 अनलाइन टेक्नोलियन सहयोगको साथ आउँछ. तपाई सँधै यसको टेक्निकल समर्थन टोली बाट कुनै पनि समय र कुनै दिन मद्दत खोज्न सक्नुहुनेछ.
यहाँ यसको विशेषताहरु को एक पुन: प्राप्ति हो:
यसले एकै पटक
मा 100 भन्दा बढी डेटा तत्वहरु लाई स्क्रैप गर्न सक्दछ यो धेरै वेबसाइटहरु लाई स्क्रैप गर्न सक्छ। एक एकल दौड
यो सानो आकारमा छ (662. 62KB)
यसले Windows 98, NT, 2000, Me, XP, 95, 2003, र विन्डोज विस्टालाई समर्थन गर्दछ
यो अनलाइन टेक्नोलियन समर्थन
किन होइन यसको परीक्षण प्राप्त गर्न यसको परीक्षण अवधिको फाइदा उठाउनुहुन्छ? यो पूर्णतया निःशुल्क छ, र तपाइँलाई परीक्षण अवधि पछि यसलाई खरीद गर्न कुनै पनि तरिकामा दायरा छैन. अन्य शब्दहरुमा, यो प्रयास गर्न को लागी केहि पनि छैन.